Seychelles oo iftiimisay Dhacdadii Virtual Talyaani
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles oo iftiimisay Dhacdadii Virtual Talyaani
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • Shirarka • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Jasiiradaha Jasiiradda Seychelles
Jasiiradaha Seychelles waxaa la saaray iftiiminta intii lagu jiray maalin dalwad ah oo uu soo qabanqaabiyay Xafiiska Dalxiiska Seychelles ee Talyaaniga 26 -kii Sebtember, 2021.
Soo -booqdeyaasha Talyaaniga ee haysta Green Pass -ka saxda ah waxay hadda u safri karaan Seychelles iyagoo leh karantiil iyo shuruudaha go'doominta marka dib loogu laabto Talyaaniga.
Horumarkan cusubi wuxuu kor u qaaday dalxiiska Seychelles maadaama ay ka qaybgashay dhacdadii dalwaddu ahayd.
Qeyb ka mid ah xamaasadda dhacdada waxaa ka mid ahaa abaalmarino sida meel safar aqoonsi ah oo lagu tago janno qaali ah.
Bixinta madal kor loogu qaadayo halka loo socdo suuqa Talyaaniga iyo la kulanka ganacsiga, dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyada oo Wasaaradda Caafimaadka Talyaanigu ku dhawaaqday wax badan oo la sugayay marinka dalxiiska ee Seychelles kaas oo ugu dambayntii waxay u oggolaan doontaa dadka socotada ah ee ka socda gobolka inay soo booqdaan jasiiradaha cajiibka ah.
Sida laga soo xigtay horumarka cusub, booqdayaasha Talyaaniga ee haysta Green Pass sax ah ayaa hadda u safri kara Seychelles iyagoo leh karantiil iyo shuruudaha go'doominta markay ku soo noqdaan Talyaaniga, haddii ay soo bandhigaan baaritaan PCR diidmo ah oo la sameeyay 48 saacadood ka hor bixitaanka iyo inay sameeyaan suufka ugu dambeeya markay yimaadaan garoon diyaaradeed oo ku yaal Talyaaniga.
Dhacdadu waxay u oggolaatay kooxda inay cusboonaysiiso ganacsiga xeerarkan cusub isla markaana kor u qaado kalsoonida wakiillada safarka oo si xamaasad leh u sugayey inay bilaabaan iibinta jasiiradda mar kale.
Soo -bandhigayaasha bandhigga xafladda waxay ahaayeen dhowr wada -hawlgalayaal, oo kala ah, Berjaya Hotels Seychelles, Adeegyada Socdaalka Creole, Ethiopian Airlines, Afar Seasons Resorts Seychelles, Go World Tour Operator, North Island Luxury Resort, Paradise Sun Tsogo Sun Hotels, Qatar Airways, Raffles Seychelles, Hoteelada Sheekooyinka iyo Goobaha Dalxiiska.
Maalinta Dalxiiska ee Seychelles waxaa lagu martigeliyay madal teknolojiyad sare loo qoondeeyay halkaas oo kaqeybgale kasta uu lahaa astaan ​​shaqsiyeed oo ku dhex wareegi karta tarabuunka isla markaana la falgali kara soo bandhigayaasha iyo midba midka kale. Ka sokow isku xirnaanta, soo -bandhigayaashu waxay awood u yeesheen inay la wadaagaan bandhigyo, fiidyowyo, iyo geliyaan agab xayeysiis.
Abaalmarinno xiise leh, oo ay ku jirto meel safar aqoonsi ah oo loogu talagalay janno qaali ah, ayaa la soo bandhigay, iyada oo loo marayo Kediska halkaas oo kaqeybgalayaashu ay tahay inay ku dhammaystiraan khariidad noocyada Seychelles flora iyo fauna.
Danielle Di Gianvito, Wakiilka Suuqgeynta Dalxiiska Seychelles ee Talyaaniga, ayaa faallo ka bixiyay: “Seychelles waxay ku faraxsan tahay inay soo dhoweyso dalxiisayaasha Talyaaniga ee doonaya fasax nasasho leh iyo waayo -aragnimo aan la iloobi karin - waxaan si joogto ah uga shaqeynaynay inaan xiriir dhow la yeelano xarumaha hoyga, diyaaradaha iyo hawlwadeennada dalxiiska si loo horumariyo loona diyaariyo si ay u helaan dalxiisayaal caalami ah, kuwaas oo, ugu dambayntii, ku jira Talyaaniyiinta jecel meeshan cajiibka ah. Dhacdadani waxay ahayd guul weyn oo dhiirrigelin weyn u ah bilow cusub oo cusub. ” Dhacdada waxaa soo raacay dhowr waxqabad oo ka socda suuqa Talyaani, ha ahaato mid muuqaal ah iyo mid jireedba.
Booqdayaasha Seychelles waa inay buuxiyaan foomka oggolaanshaha safarka seychelles.govtas.com oo tusa caddaynta baaritaanka PCR -ga taban 72 saacadood ka hor safarka loo socdo.
Seychelles waxay ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee si buuxda ugu furmay booqdayaasha iyadoon loo eegin heerka tallaalka bishii Maarso ee la soo dhaafay ka dib barnaamij tallaal oo aad u adag kaas oo dadkiisa badidood la tallaalay. Waxay hadda bilowday inay siiso dadka qaangaarka ah iyo sidoo kale tallaalka PfizerBioNTech qiyaasaha xoojinaya. Tirada kiisaska COVID-19 ayaa si aad ah hoos ugu dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo kiisas aad u yar ay ka dhex dhaceen dalxiisayaasha.